Indlela yokubona i-backlink ukukhula kwiGoogle Analytics?
I-Google Analytics ingenye yezixhobo zokuhlalutya zobuchwepheshe ezibonelela ngee-webmasters nazo zonke iinkcukacha ezifunekayo malunga neemetriki zewebhu kunye nesimo kwi-SERP. Inika ithuba lokulandelela impumelelo yophuhliso lweejini zophando kunye nokufikelela kwizigqibo ezihambelana nolwazi olufunyenweyo. Enye inzuzo ecacileyo yale software ye-Google analytics yikhono lokulandelela i-backlinks iwebhusayithi. Kwi-link zangaphandle zangaphandle zibizwa ngokuba zihanjiswa. Yingakho kukufuneka ukhangele iingxelo zakho zokuhlalutya.
Eli nqaku linikezelwe ulwazi malunga nokujonga i-backlink kwi-Google Analytics kunye nendlela yokuhlukanisa ngayo umgangatho kunye nomthombo. Ngoko, silapha.
Iimpawu zokubona nokujonga i-backlink kwiingxelo zeGoogle Analytics
Khetha iprofayile efanelekileyo yeGoogle
Kwinqanaba lokuqala intsebenziswano kunye ne-GA, kufuneka uqinisekise ukuba usebenzisa i-akhawunti echanekileyo, iprofayile kunye neembono njengoko unokuba neenkcukacha ezininzi apha kunye neeprojekthi ezininzi ezahlukeneyo ezinokubangela ukuba. Isayithi osebenza ngoku kunye nayo iya kufakwa kwisandla sokunene sephepha. Udinga ukuchofoza kuyo kwaye ukhethe olufanelekileyo.
Iingxelo zokufumana izinto
I-backlinks ithrafikhi apha ihlelwe ngedatha yokufumana. Amanyathelo alandelayo anokukunceda ukuba ulandele ingxelo yakho ye-backlink ngokuchanekileyo:
Chofoza "Ukufumana" kwimenyu yokunxele ukujonga zonke iingxelo zokufumana;
Khetha "All Traffic" yehlayo;
Cofa kwiqhosha elithi "Referrals". Ingxelo yeReferral iya kukunika i-backlink data
Imithombo yendlela yokudlulisa ingatholakala kwiCandelo le-Google Analytics elibizwa ngokuthi " Ingxelo yeReferral. "Nantsi uza kubona yonke idatha efunekayo malunga ne-backlinks yakho kunye nemithombo apho bafaka kuyo.
Amasu okusebenza okujonga i-backlink ku-GA
Hlanganisa amacandelo amatsha
Ukunciphisa uphando lwakho lwe-backlinks kwaye ufumane ulwazi oluthe ngqo,. Olu buchule lweGoogle Analytics luyakunceda ukuba udibanise iintlobo ezahlukahlukeneyo zezivakashi eziza kwisayithi yakho nge-backlinks.
Ukuze ulandele iinqununu zakho, landela amanyathelo:
Chofoza kwi "Yongeza iCandelo";
Sebenzisa ibhokisi lokukhangela;
Bese uklikha kwi-"Faka isicelo" ukuze uqinisekise;
Emva koko, uya kugcina ipesenteji yabaphulaphuli abatsha kunye nolwazi oluqhathanisayo.
Ukuqwalasela imithombo yakho ye-backlink, ungasebenzisa "ubukhulu beprayimari
"Sebenza kwi-GA. Isiseko esingundoqo esingagqibekanga ngumthombo. Kule tibhu, unokwazi ukugcina izizinda ezingasemva. Ukugcina iphepha le-backlink, kufuneka ucofe kwelinye lamasipala. Ngokwenza njalo, uya kukwazi ukubona indlela yokudlulisa ikhonkco lakho langaphandle.
Emva kokutshekisha yonke imithombo elandelayo ye-backlink, unokukhangela kwakhona ukuba yimaphi amaphepha ekuhla. Unokwenza oku, ukulandela ezi nyathelo:
Cofa kwi "Ikhasi lokuHamba";
Wabe esecacisa iphepha lokuhlaziya elikhankanyiweyo;
Hlola ukufumana kwakho, ukuziphatha, kunye nedatha yokuguqulwa; (ungakhangela olu datha oluhamba phambili) Source .